Year 2015 - Myanmar Asian TV
Coin Locker Girl ( 2015 )
Coil Locker Girl 2015 #unicode ဒီတဈခေါကျကတော့ 2015 ခုနှဈထှကျကားကောငျးလေးတဈကားနဲ့မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။ အီယောငျးလို့ချေါတဲ့ စှနျ့ပဈခံကလေးတဈယောကျကို ငှတေိုးခြေးစားတဲ့မိနျးမတဈယောကျကမှေးစားလိုကျတယျ။ ကလေးတှမှေေးစားပွီး ခိုငျးစားတဲ့နရောပါ။ ငှခြေေးတယျဆိုပမေယျ့ ပွနျမဆပျနိုငျရငျ လူသတျ၊ ကလီစာထုတျရောငျးတဲ့ အလုပျတှပေါလုပျတယျ။ အီယောငျးကတော့သူ့အမအေလုပျမှာကူညီရတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ပကျဆူဟှနျးဆိုတဲ့ ကွငျနာတတျတဲ့ကောငျလေးတဈယောကျနဲ့ဆုံတှခေဲ့တယျ။ ဆူဟှနျးအဖဖွေဈသူ ထှကျပွေးတော့ အီယောငျးအမကေ ဆူဟှနျးကိုသတျဖို့လုပျတယျ…. ဒီလိုနဲ့ အီယောငျးတဈယောကျ သူ့ကိုကွငျနာတဲ့ကောငျလေးကို ကယျတငျနိုငျမှာလား………
The Lost Choices ( 2015 )
2015 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Korea Drama, Crime ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားတစ်ခုပါ … ဂျီအွန်း (Shin Hyun-Bin) ဟာ အသက် ၂၀ ခန့် မိန်းမငယ်လေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမငယ်စဉ်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကားမတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့် စကားပြောရာမှာ အခက်အခဲဖြစ်နေသူပါ … သူမဟာ Game Designer တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး တစ်နေ့မှာ သူမရဲ့အိပ်မက် တကယ်ဖြစ်လာဖို့အတွက် အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ……
Fall in Love LikeaStar ( 2015 )
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ 2015 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Fall in Love like A Star ဆိုတဲ့ Chinese Comedy Romance Film လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … ဇာတ်ကားနာမည်လေးအတိုင်း Star တစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ကျွမ်းဝင်မိတဲ့အခါ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ ? ဒီဇာတ်ကားလေးကိုတော့ Swords of Legend…
Love Arumirai ( 2015 )
Movie တွေမတင်ဆက်ဖြစ်တာကြာပီဖြစ်တဲ့အတွက် MMATV ရဲ့ချစ်လှစွာသောပရိတ်သတ်ကြီးကို 2015 ခုနှစ်ထွက် “Love Arumirai” ဆိုတဲ့ထိုင်းကားလေးတစ်ကား တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ Geng နဲ့ Bella လို့ခေါ်တဲ့ ဇနီးမောင်နှံစုံတွဲတစ်တွဲရှိပါတယ်။ Geng ကတော့ရဲတစ်ယောက်ဖြစ်ပီး Bellaကတော့ရုပ်ရည်လှပချောမောတဲ့ Fashionဆရာမကြီးတစ်ယောက်ပါ။ သူတို့နှစ်ယောက်က အလုပ်အမြဲရှုပ်တတ်ကြပီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လည်း အဆင်သိပ်မပြေကြဘူး။ ဒီလို့နဲ့တစ်ညမှာု့နှစ်ယောက်သားစကားများပီး အိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါ မနက်မိုးလင်းတော့ ကိ်ုယ်ချင်းလွဲနေတာကို သိလိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေက…
Ex Files2: The Back Up Strikes Back ( 2015 )
Ex-Files ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Ex-Files2လေးကို တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ် … ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် Ryan Zheng Kai နှင့် Amber Kuo တို့က ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် … KPop Boy Group တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Exo Group မှ Yixing Zhang လဲ…